Foto nri: Atụmatụ, usoro na usoro na ekwentị gị | Gam akporosis
Foto nri: ndụmọdụ, ngwa na usoro iji ekwentị gị
Michael Hernandez | | Emelitere na 25/09/2020 20:48 | Ngwa gam akporo, Foto, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Anyị agaghị agọnahụ ya, foto nri ahụ ghọrọ ezigbo ihe na Instagram na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ. Ekekọrịta foto nke anyị culinary masterpieces, ma ọ bụ ndị mere na ụlọ oriri na ọ restaurantụ masụ mas jụụ N'oge a, ọ bụ otu ụbọchị ka ọ dị, mana ọ naghị adị mfe dịka anyị nwere ike iche.
Anyị chọrọ ịkụziri gị iji were foto kacha mma nri na ekwentị mkpanaaka gị maka aghụghọ na ngwa ndị a. Chọpụta anyị otu ị ga - esi see foto nri ma yie ezigbo influencer, Ngwaọrụ gam akporo gị ga-arụ ọrụ ahụ ma nsonaazụ ya ga-ekwesịrị ịkekọrịta na Instagram.
1 Usoro iji were foto kacha mma maka nri
2 Ihe nkwado maka foto nri
3 Dezie foto nri
4 Foto nri maka Instagram
Usoro iji were foto kacha mma maka nri
Foto nri chọrọ usoro ụfọdụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo efere nri dị n'ihu anyị ma anyị chọrọ inye ya ọkwá dị elu. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-achọ ezigbo nsonaazụ. Ọ bụrụ na ọ nwere ike, erila hamburger ahụ, anyị ga-egosi gị otu esi ese foto ya.
Ọ dị mkpa ka anyị debe ihe anyị chọrọ ịse "n'etiti", Maka nke a, oge eruola ịchọpụta ma ihe dị mkpa bụ nri niile, gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ naanị otu ihe mejupụtara ya, nke anyị ga-eburu n’uche ka ihe ga-esi na ya pụta ga-eju afọ.
Ọ bụrụ na ọmụmaatụ, anyị chọrọ ịse foto hamburger, Ihe na-adọrọ mmasị bụ na anyị nwere ike igosipụta ngwaahịa ahụ dum, gụnyere ọnọdụ ya. Nke a dị mfe, anyị na-etinye onwe anyị n'otu ogo dị ka ngwaahịa ahụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhọrọ "Eserese Portrait" nke ngwaọrụ ahụ, mgbe ahụ ka mma karịa mma, nsonaazụ ọ bụrụ na anyị mee ihe ziri ezi ga-adị mma.
Oburu na aka ozo anyi choro fOfere ma ọ bụ salads, Dị ka o kwesịrị, anyị na-esere foto ahụ site n'elu, na-echefughị ​​na anyị ga-etinye ngwaahịa ahụ n'etiti. N'akụkụ aka nke ọzọ, Ọ bụrụ na anyị enwee ngwaahịa dịtụ mgbagwoju anya karị, ikekwe anyị kwesịrị ịtụle ịbịaru nso na ilekwasị anya na ngwaahịa kpakpando ahụ.
Nke a bụ agha siri ike mmeri. O doro anya na ọkụ ọkụ dị na foto, ọkachasị igwefoto "ka njọ". Ọ bụrụ na anyị nwere a elu-ọgwụgwụ ngwaọrụ ma ọ bụ ezi atụmatụ, ọ ga-adị mfe dị ka rụọ ọrụ ndị Nightkpụrụ abalị.
Otú ọ dị, ọ dị nwute na ọ na-esiwanyewanye ike ịnwe ọkụ ọkụ n'ụlọ nri, nke dị oke njọ na iji ekwentị n’eji foto dị mma. Ọ bụ ya mere ọ ga - eji bụrụ na anyị ga - eguzo n'ihu ngwaahịa ahụ ma were ohere iji kpughee igwefoto.
Mgbe, n'ọnọdụ ọ bụla, họrọ maka flash. Ismhapụ flash na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ bụ isi ihe abụọ:
Are ga-ewe ndị fọdụrụ n'ime ndị ọbịa iwe.
Foto ga-enwe ihe na-ekwekọghị n'okike.
SỌ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ịnọ n'ụlọ, ọ ga-adị mma mgbe niile ịme ka ọkụ ọkụ sitere n'okike, n'akụkụ windo, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ inweta nsonaazụ ọkachamara, anyị ga-aga nzọ na isi mmalite ọkụ.
Ọnọdụ ya na-adịkarị mkpa, ma anyị aghaghị ịchọpụta ókè ọ ga-eruru. O doro anya na mgbe anyị na-adịghị ewere nri dị n'ihu, foto ga-adị mkpa karịa. Maka nke a, anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị nọ n'ọnọdụ dị mma. O doro anya na ọ bụrụ na anyị bu n'obi ịse nri anyị e mechara ọhụrụ, yana 'kichin' tụgharịrị ala ', anyị nwere ike nweta nsonaazụ sitere n'okike mana ọ bụghị ezigbo mma.
Ọ bụ ya mere anyị ga-eji nwee ọkwa ahụ, anyị ga-enye gị ụfọdụ ihe atụ ngwa ngwa:
Ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, gbalịa igbochi ihe mkpuchi ahụ ịpụta n'ime efere ahụ.
Gbaa mbọ hụ na enweghị nri nri ma ọ bụ unyi na akwa akwa na tebụl.
Ọ bụrụ na anyị nwere gburugburu ebe obibi dị mma, ọ ga-adị mma iwepụ obere foto ahụ ntakịrị ka e wee nwee ike ịchọ mma ahụ.
Agbanyeghị, anyị ga-eburu n'uche ma ihe dị ezigbo mkpa bụ nri ma ọ bụ ịtọ ntọala ahụ, efere ahụ ga-efufu ọtụtụ ihe ọ nwere, n'ihi ya, anyị ga-anwa ịme nkwanye ugwu mgbe niile maka nri anyị chọrọ ịse foto. Ezigbo akụ na-abụkarị "Boomerang" na Instagram, Dịka ọmụmaatụ, ịbịaru efere ahụ nso na ebe ị nwere ike ịhụ mma nke ogbo ahụ, mana mechaa site na ịme atụmatụ zuru ezu banyere nri dị mkpa, ọ dị mma
Ihe nkwado maka foto nri
Ọzọ m chọrọ ịmetụta nke ahụ ihe nkwado di iche iche kwesiri ibu ihe nkwado ma ghara izu oke na efere na anyị chọrọ n'ezie foto, ma ọ dịghị ewute ya, lee ụfọdụ ndụmọdụ.
Mmakọ ahụ bụ akụkụ nke nri, ọ bụrụ na mmanya mmanya gị nwere ike ịpụta n'akụkụ efere ahụ, egbula oge maka nke abụọ, ee, echefula ịkọwa mmanya ị na-a drinkingụ.
Họrọ isiokwu na ngwa, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere pasta carbonara mara mma, ọ gaghị afụ ụfụ igosi igwe nri na-acha ose na azụ. Weta akụkụ gị kachasị mma.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ndị a bụ ụfọdụ nhọrọ, mana na nke a ọ ga-adabere na gburugburu ebe obibi na ngwaahịa esiri esi na ajụjụ. Nke a ga - enye gị foto nri ndị ọkachamara.
Dezie foto nri
O doro anya na foto nri agaghị agbana idezi. Na gam akporo anyi nwere otutu ngwa eji eme ihe a, mana ihe di nma bu ihe doro anya banyere ihe di iche iche:
Were ohere saturate agba (na-enweghị na-aga n'ime), na Efrata bụ kwesiri ngosi n'agbanyeghị obere ha na naturalness nke ngwaahịa.
Lezienụ anya na ọkụ na onyinyo, ị nwere ike ịkọwa mpaghara ndị ahụ gbara ọchịchịrị.
Chefuo oji na oji, nzacha B / W anaghị anabata ihe oyiyi nri, sepia anaghị enyocha.
Camerasfọdụ kamera ekwentị dịka Huawei, Samsung ma ọ bụ Xiaomi nwere ọnọdụ «AI», ọgụgụ isi Artificial ga-achọpụta na ọ bụ efere nri ma nye gị aka.
Foto kacha mma ị sere, obere oge ị chọrọ idezi ya, mana ọ naghị afụ ụfụ iburu aghụghọ ndị a n'uche. Were foto nri kacha mma dịka nke a.
Foto nri maka Instagram
Instagram na-agbazinye onwe ya ọtụtụ ihe na nri foto. Maka nke a, anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ọkacha mmasị m abụọ bụ ihe ndị a:
Na @androidsisweb anyị na-arụ ọrụ na ntuziaka foto nri, kedu ihe ị chere maka ule ndị a?
A post na-akọrọ site Miguel Hernandez Onyinyechi (@nkeigbo) Sep 12, 2020 na 10: 26am PDT
Otu album: Jiri ohere nke imepụta "ọba" foto nke ị ga-enwe ike itinye efere nke oge niile, yabụ na ị gaghị atụ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ gị bọmbụ.
Ezigbo boomerang: N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike igosipụta n'efere niile e gosipụtara n'oge ahụ, ma ọ bụ mee atụmatụ na-atọ ụtọ. Ga-enwe ezigbo foto nke nri ọkachamara.
Ọ bụ ezigbo nhọrọ na Instagram ị ga - eji ohere iji kpado, dịka ọmụmaatụ, ụdị mmanya ị na - a drinkingụ, Jiri ohere ahụ họrọ ụlọ nri na ohere niile ngwa a na-enye, yabụ ndị na-eso ụzọ gị ga-adịkwu mfe ma a bịa n'ịchọpụta ihe ndị ahụ ma ọ bụ ebe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Foto » Foto nri: ndụmọdụ, ngwa na usoro iji ekwentị gị